Silsiladda Xaydha 3 – Garanuug
Home / Suugaan / Silsiladda Xaydha 3
Shaafici Qaasim Nuur March 17, 2017	Suugaan Leave a comment 3,660 Views
Mugga sow silsiladdii halkaa haka socoto maaha? Sow nin waliba tarkii haka gar naqo maaha? Oo weliba gabay hasoo adeegsado maaha?! Waataynu soo sheegnay in ninkii ugu horreeyey ee arrinka xaydha ka garnaqay uu ahaa Maxamed Nuur oo “Huube” loo yiqiin. Sidoo kale Diiriye Aw Guuleed Warsame waatuu cagidiiba hadal ka keenay hannaankii gar-qaadiseed ee Huube.
Waayahay… Halkan ayaa waxa meertada kasoo gelaya Aar Xandulle Nuur oo uu Huube adeer rumaad u ahaa. Aar Xandulle markii uu xaajadii maankiisa la kaashaday waxa u muuqatay, gari Allay taqaannaaye, in adeerkii Huube hawshii garqaadista ee uu galay aanu kasoo dhalaalin, balse uu ku barbarriiqday. Isagoo aad mooddo garsoore madaxiisu ku cirreystay miiska dacwadaha, ayuu Aar Xandulle Nuur inoo balballaadhinayaa waddadii ay isaga la ahayd in gartaa loo maro.
Wuxuu ku doodayaa inay qummanayd in gartaa guddi madax bannaan loo saaro, oo welibana wixii adduun ah ee xaajadaa ka midho-dhalinteeda ku baxaya meel la saaro, si looga bedbaado laaluushka doc-ka-tuurka ah ee waqtigan la joogaba halakeeyey hannaankeenna garsoorka. Si lillaahiya markii arrinkaa loo lafoguro, labada dhinac na laysu soo fadhiisiyo, in mudduciga markhaatiyo la weydiiyo, haddii uu soo waayana madaacaleyga millad laga doono.
Marka aan kugu jalbeebiyo meerisyada xaaja-yaqaannimadu ku gobo’ tidhi ee uu Aar Xandulle arrintaa kaga garnaqay, ayaa waxa markiiba maankaaga kusoo degdegaya mid ka mid ah afartankii xadiis ee wadaaddada Shaaficiyadu xerta u laqbayn jireen kolka ay cilmiga xadiiska u seesdhigayaan. Dhaqan-yaqaanka qaarkii ayaa yidhaahda gabayaaga Soomaaliyeed wuxuu u badan yahay isagoo masalooyinka shareecada bowsi uun ku maqlay, inuu haddana tixihiisa maanso si farshaxannimo leh ugu dhex sooho.
Kolka uu Aar Xandulle hilinka u jeexo halkii ay ahayd in gartaa la mariyo, ayuu usoo daadegayaa inuu wax ka yidhaahdo arrinkan lagu kala saftay ee dhinac na dooddiisu tahay “haddii dhuunigu silloonaa maxaa loo dharqanayey?”, dhinaca kalena ku adkaysanayo in tafantoofkii toobiyaha dheeri uu ku moohaariyey, wax kastaba ha ahaadee, wixii la helayey in la calafsado.
Sida uu xogta ku helay Aar, raggii socotada ahaa waxaa bacadle awr uga milaallaa soor jaad walba leh oo ay ka mid ahayd timir, caleen-shaah iyo weliba iidaan kale. Haddaba mesalada maankiisa gadday ayaa waxay tahay, haddii subaggii sahayda loo sitay la qoonsaday, sowtan awrta xidhiidhsani la dhigijac leh soor jaad kastaba isugu jirta, maxaa ragga looga urquumi waayey?!! Wuxuu yidhi Aar Xandulle Nuur:
Margi-weyne awr bay hanfaha, uga milaallayde
Macalluul ka-yaab iyo xarrago, waaba kala maane
Muslinnimo haddii loo garnaqo, marinka dawleeya
Markii ay halkaa marayso, oo ay gaadhey in wiil iyo adeerkii laba saf kala raacaan, ayaa waxa meertadii kusoo biiray nin la odhan jiray Jaamac Xirsi. Jaamac marka hore waa ladqabo. Waxa uu tolweynaha guud iyo ardaaga arrintani ku rafatayba usoo jeedinayaa inay arrinka xaydha soo afmeeraan maadaama uu soo jiitamay. Waxa uu dareensiinayaa in jarmaade, guure iyo galab-carrawtiinba geedkii shaxda iyo golihii shirka ay kusoo dhacayaan gabayada xaydhu. Sidaa awgeed, kub geeljire kor looma dhaqo e, waxa uu Jaamac ku talinayaa inay arrinkooda hoos hoos u dhammaystaan, si aan duddooyinka kale ugu maadsan.
Odayeyntaa kaddib ayuu Jaamac Xirsi weedhiisa ka ridanayaa wixii la isku maan dhaafay. Waxa uu hadal ku gooyey mar haddii aad baradaada ka durugto inay baahiyi kula ollog tahay, sidaa awgeedna nimankii soortii xilka lahayd faraha geliyey loogu garaabayo, maxaa yeelay duruufta ayaa ku moohaarisay. Halkaas ayuu Jaamac Xirsi ku raacay safkii Weerar Cali iyo weliba Huube, isagoo Xirsi-Caamir na ku maagay inuu seediyaashii saaruq usoo miiray.
Ugu danbaynta ayuu Jaamac si toos ah u abbaarayaa Diiriye Aw Guuleed oo uu ku tilmaamay nin uu ficil qaaday, haddii aanu is yeel yeelayna ay isagaba u muuqato in gartii laga helay.
Nimanyow gondaha reer Xirsi, iyo guudka Habaryoonis
Haddii gabaygi xaydhee fogaa, haatan go’i waayey
Garta marag ah adigaa ku furay, goor horeetaba e
silsiladdii xaydha suugaan	2017-03-17
Previous Mamuu iyo Seyn 14: Naf Saafi ah iyo Quus
Next Mamuu iyo Seyn 15: Kacdoon iyo Dhagar